IINDIDI ZEEHENJISI ZEKHABINETHI YEKHABHINETHI - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iindidi zeehenjisi zeKhabinethi yeKhabhinethi
Iindidi zeehenjisi zeKhabinethi yeKhabhinethi
Wamkelekile kwisikhokelo sethu esineenkcukacha zeentlobo zeehenjisi zekhabhinethi yasekhitshini kubandakanya iindlela ezithandwayo, amanqaku kunye nokugqitywa.
Ukukhetha iihenjisi zeekhabhathi zakho zasekhitshini kubonakala ngathi ngumsebenzi olula. Emva kwayo yonke loo nto, ziihenjisi nje, akunjalo? Ngokwenyani, unokumangaliswa ukuba zingaphi iindlela onokukhetha kuzo xa kufikwa kwiihenjisi zekhabhinethi yasekhitshini. Ihenjisi zekhabinethi yekhitshi ziyahluka ngokweendidi, izinto abazibonisayo, kwaye zigqityiwe. Kwesi sikhokelo, siza kujonga umahluko kwiindidi ezahlukeneyo zeehenjisi zekhabhinethi kunye nendlela yokukhetha, yokulinganisa, nokufaka iihenjisi kwiikhabhathi zakho zasekhitshini. (Eyahlukileyo iintlobo zezitayile zekhabhinethi yasekhitshini Ndwendwela eli phepha.)
Iimpawu zehenjisi yeKhabhinethi
Iihenjisi zeKhabhinethi ezifihliweyo
Iihenjisi zeKhabhinethi eziValiweyo
Ukulungisa iihenjisi zeKhabhinethi
Iihenjisi zeKhabhinethi enzima
Iindidi zehenjisi yeKhabhinethi
Ukufakwa kwiihenjisi zeKhabhinethi
Iihenjisi zeKhabhinethi eziPhezulu
Iihenjisi zesakhelo sobuso
Umphezulu weehenjisi zeNtaba
Iihenjisi zeKhabhinethi ezingasetyenziswayo
Iihenjisi zeKona yeeKona
Isonge iihenjisi ezijikelezileyo
Iindidi zehenjisi yeKhabhinethi igqityiwe
Iihenjisi zeKhabhinethi yaseYurophu
Isikhokelo sokutshintsha iihenjisi zeKhabinethi yeKhabhinethi
Ukulinganisa iihenjisi zeKhabhinethi
Uyifaka njani iihenjisi zeKhabhinethi
Indlela yokulungisa iihenjisi zeKhabhinethi
Apho uthenge iiKhonkco zeKhabhinethi yeKhitshi kwi-Intanethi
Xa uqwalasela iihenjisi zekhabhinethi, kukho izinto ezithile ekufuneka uzikhangele. Umzekelo, ngaba ufuna ihenjisi yokuhombisa eya kuthi yongeze ukubonakala kweekhabhathi zakho okanye ufuna into efihliweyo ngokupheleleyo? Mhlawumbi ufuna ukuba iikhabhathi zakho zizivale zodwa okanye zisilele ukuqinisekisa ukuba iikhabhathi zakho azinakukrwitshwa. Ezi ziimpawu oza kufuna ukuziqwalasela ngaphambi kokuthenga iihenjisi zekhabhinethi.
Iihenjisi zekhabhinethi ezifihliweyo, ngamanye amaxesha ekubhekiswa kuzo njengeehenjisi zekhabhinethi ezifihliweyo, zezona kanye zivakala ngathi. Zifihlakele kwimbonakalo njengoko zibekwe ngaphakathi komnyango wekhabhathi ngaphandle kwenxalenye ephume ngaphandle komnyango wekhabhinethi. Kuba azizukubonwa, lukhetho olusebenzayo olusebenzayo olungahlali lubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokugqiba okanye ukuhombisa. Oku kunika ikhabinethi ukubonakala ngokungathi iyadada endaweni.
Abanini bamakhaya abaninzi bayazonwabela ezi ntlobo zeehenjisi kuba akufuneki bakhathazeke ngokukhetha uyilo olufanelekileyo okanye ukuba ihinji iya kungqubana nokuhonjiswa kwabo ekhitshini. Oku kubenza babe lukhetho olukhulu ukuba kukho nakuphi na ukungafezeki kwimilinganiselo yekhabinethi engaphakathi-kwiziko okanye iihenjisi ezibonakalayo ezijijekileyo ezinokutsala umdla ongafunekiyo.
Kuba ezi zingadibanisi uhombiso lwekhitshi, ngamanye amaxesha zisetyenziswa ukongeza kwiihenjisi zefaux ezihleli ngaphandle kwekhabhinethi.
Ikhonkco lekhabhathi yokuvala ethambileyo inceda ekuqinisekiseni ukuba isandi seekhabhinethi ezibethayo ayisiyonto ekufuneka ujongane nayo. Oku kuyayithintela le ngxolo ngokuqinisekisa ukuba iikhabhathi zakho zivala kancinci. Xa usebenzisa iihenjisi zekhabinethi ezivaliweyo ezithambileyo, kuya kufuneka usebenzise amandla angaphezulu kunokuba ubufuna ukusebenzisa nezinye iindlela zeehenjisi.
iingoma zothando zakudala zemitshato
Indlela le mi sebenzi ngayo ukulawula ukuhamba kocango lwekhabhinethi xa ludlulela ngaphaya kwendawo ethile. Ezi iihenjisi zisebenzisa inkqubo elula yokubumba amanzi ukuze yenze inkunkuma etsala ucango ngobunono.
Kuyafana kwaye kuhlala kudidekile kwiihenjisi zekhabinethi ezisondeleyo zivala ngokwakho okanye iihenjisi zekhabhathi ezilayishwe entwasahlobo. Oku kusebenzisa intwasahlobo engacombululekiyo xa kuvulwa umnyango kwaye xa ukhulula ucango lwekhabhathi, intwasahlobo iyabuyela endaweni yayo, ivale ikhabhathi.
Ezi zinokusebenzisa inkqubo ye-hydraulic endaweni yasentwasahlobo. Ezi zinto zakha indawo etsala ucango xa ingabanjwanga.
Iihenjisi zokuzivala zine-drawback yokuba iihenjisi zekhabinethi yokuvala ezithambileyo azenzi njalo. Ukuba ihenjisi yokuzivala yoyilo lokungasebenzi kakuhle okanye eyaphukileyo, umnyango unokutywinwa uvalwe de iihenjisi zisuswe.
Kukho iintlobo ezithile zeehenjisi zekhabinethi ezenziwe ukuba zikwazi ukuhlengahlengiswa emva kokuba zifakiwe. Ezi zaziwa njengeehenjisi zekhabhinethi yaseYurophu esiya kuthi sijonge nzulu kuzo ukuba ziyintoni kunye nendlela yokuzilungisa kamva.
Ukuba ukhathazekile ngeminyango yekhabinethi enemilinganiselo engaqhelekanga engasebenzi kwiihenjisi ezibekwe kakuhle kodwa usafuna ihenjisi ebonakalayo, ukhetho olunye kukusebenzisa iihenjisi ezisebenzayo zokuhombisa ngokubambisana neehenjisi ezifihliweyo. Ngale ndlela, unganakho, iihenjisi ezibonakalayo ezikunika inkangeleko oyifunayo kunye neehenjisi ezisebenzayo.
Iihenjisi zekhabhinethi enzima zihlala zisetyenziswa kuseto lweshishini kunendawo yokuhlala. Umzekelo, iingcango zomsebenzi onzima kwiilebhu zophando, izithuthi ezixhobileyo, izikhongozeli zokuhambisa, kunye nokulayisha iingcango kunokwenzeka ukuba zisebenzise iihenjisi zomsebenzi onzima.
Ukuba ezi zisetyenziselwa isicelo sokuhlala, zihlala zihlala kwiikhabhathi ezinzima okanye ezigqithileyo. Oku akuqhelekanga rhoqo, nangona kunjalo, kuba iihenjisi zomsebenzi onzima zicetyiswa kwiminyango yeepawundi ezili-1 okanye ngaphezulu.
Xa kufikwa kubukhulu, iihenjisi zomsebenzi onzima zilinganisa malunga ne-intshi ye-intshi. Ukuya kuhlobo, iihenjisi zomsebenzi onzima ligama lesambrela. Endaweni yoko, ezi zihlala ziinguqulelo zomsebenzi onzima weehenjisi, amaxesha amaninzi iihenjisi zeepivot okanye iihenjisi zomgqomo zisetyenziswa.
Kukho intsingiselo emibini xa kufikwa kwikota yeehenjisi zokuhombisa. Kubalulekile ukuqonda lo mahluko kwaye wazi ukuba yeyiphi inkcazo yehenjisi oyithathela ingqalelo phambi kokuthenga.
Intsingiselo yokuqala kukuba ihenjisi isebenza ngenjongo yokuhombisa kunye nokusebenza. Ezi iihenjisi zilingana nekhabhathi kwaye zinceda ikhabhinethi ukuba ivule kwaye ivale njengoko unokulindela ihenjisi kuyo. Ukongeza, ziyilelwe ukuba zikhangeleke ngakumbi kweli candelo likho ngaphandle kwekhabhinethi. Ezi zihlala zisetyenziselwa uhlobo lwehenjisi efihliweyo.
Xa kuziwa kwintsingiselo yokugqibela, unokubabona bebhekiswa kuyo njengehenjisi yefeksi. Oku akusebenzi ngenjongo xa kufikwa ekuvuleni nasekuvalweni kocango lwekhabhinethi kodwa bakhonze injongo yobuhle kuphela. Ezi zihlala zisetyenziswa kwenye yeendlela ezimbini. Kwesinye, zisetyenziselwa ukongeza kwiihenjisi ezingezizo zokuhombisa ezinje ngokuzivala okanye iihenjisi ezivaliweyo ezithambileyo ezingananjongo yobuhle. Ukusetyenziswa kwesibini kukwiikhabhathi zokuhombisa - iikhabhathi ezingavuleki ngokwenyani- njengomhombiso omsulwa.
Ngoku ukuba uyazi iimpawu ezinazo ezinye iintlobo zehenjisi zekhabinethi, uya kufuna ukuqonda ukuba loluphi ukhetho onalo olubambe ezi mpawu.
Kukho iindidi zeehenjisi zekhabhinethi ezinikezela ngezibonelelo ezahlukeneyo kunye namathuba kubanini bamakhaya. Siza kujonga uninzi lwezona zikhetho zithandwa kakhulu kwiihenjisi zeminyango yekhabhinethi apha.
Jonga ezi ntlobo zehenjisi kwi IAmazon
Okokuqala, makhe sijonge kwiihenjisi zekhabethe ezingaphakathi. Ezihenjisi zibandakanya icala elimxinwa kunye necala elibanzi. Icala elibanzi lixhuma ngaphakathi kumnyango wekhabhathi ngelixa incinci, icala elimxinwa lehenjisi libonakala ngaphandle kwekhabhinethi. Lo mda umxinwa ubizwa ngokuba liphiko lesakhelo ngelixa icandelo elibanzi laziwa njengephiko lomnyango.
Ngenxa yobume bayo obubonakalayo, iihenjisi zekhabethe ezingaphakathi zihlala zihlala zigqityiwe kakuhle okanye zisebenzisa uyilo lokuhombisa oluya kongeza kuyilo lwekhitshi lakho kunokuba ziphazamise kulo.
Zimbini iintlobo zeehenjisi ezigqunyiweyo - iihenjisi ezigqunywe ngaphezulu kunye neehenjisi ezigubungeleyo ezingaphezulu. Ukugqunywa ngaphezulu, ngokubanzi, kubhekiswa kwindlela iingcango zekhabinethi ezihlangana ngayo nezakhelo zekhabhinethi.
Iihenjisi ezigqunyiweyo ezigcweleyo luhlobo lweehenjisi oza kufuna ukuzijonga ukuba ngaba umnyango wekhabhathi yakho ugquma ubuso obupheleleyo besakhelo sekhabhathi. Ezi ntlobo zeehenjisi ziyabonakala kwaye ziza ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo. Ngokubhekisele kufakelo, ziyahluka ngokuxhomekeke kuyilo olukhethileyo kwaye zinamathela emnyango kunye nesakhelo sobuso okanye ucango nangaphakathi kwikhabhathi engenasiseko.
U-justin bieber hailey baldwin utshatile
Inketho yesibini onayo kwiihenjisi ezigqume ngaphezulu ziihenjisi ezigqume ngaphezulu. Ezi zihenjisi zisetyenziselwa iikhabhathi ezigutyungelweyo okanye iziqingatha. Umzekelo, ukuba unayo ikhabinethi edibana nomnye umnyango kwisahlulelo okanye eludongeni, olu luhlobo lwekhabhathi onokuyisebenzisa kwiihenjisi ezigqume ngaphezulu kwesiqingatha.
Ezihenjisi zincinci kakhulu kuneehenjisi ezigqunyiweyo ezigcweleyo kuba kufuneka zivumele indawo yazo zombini iingcango zekhabhinethi ukuba zivule ngaphandle kokubethana.
Iihenjisi ezigungxulwayo zifana kakhulu neehenjisi zee-butt, esiza kujonga kuzo okomzuzwana. Ezi ziqhotyoshelweyo kwicala elinye kumnyango wekhabhinethi kwaye kwelinye icala kwisakhelo somnyango wekhabhinethi. Ngokungafani neehenjisi zempundu, ezi zenziwe ngecala elinye elilixande elincinci kwaye elinye icala linexande elikhulu elinomngxuma kumbindi. Xa ihenjisi ivaliwe, icala elincinci lifakwa kulo mngxuma.
Ezi ayizizo iihenjisi zifihliweyo. Indawo ephambili evumela ihenjisi ukuba ivule kwaye ivale iya kubonakala ngaphandle kwekhabhinethi. Kananjalo, licebo elihle ukujonga ihinge ngesiphelo oyithandayo kwaye ehambelana nekhitshi lakho.
Ezihenjisi zokugungxula ziyaxatyiswa nangabanini bamakhaya abafuna ukufakwa ngokulula ngenxa yokuba abayidingi into yokufelwa esiza kujonga kuyo kwiihenjisi zempundu.
Ihenjisi zesakhelo sobuso lolunye lolona khetho lukhethwayo phakathi kwabanini bamakhaya eUnited States. Ezi iihenjisi zisetyenziselwa iikhabhathi ezinesakhelo esincinci esijikeleze ukuvulwa kwekhabhinethi.
Ezihenjisi ziyilelwe ukuvumela iingcango zekhabhathi ukuba zihambe xa zibekiwe ukuze zibekwe phambi kwesakhelo sobuso. Iihenjisi zesakhelo sobuso azisebenzi kwiikhabhathi ezingenachaphaza.
Ezi ntlobo zeehenjisi zincamathele kwelinye icala ukuya kwisakhelo sobuso nakwelinye iphiko ngaphakathi komnyango wekhabhinethi. Iihenjisi zesakhelo sobuso luhlobo lweehenjisi ezifihliweyo, ke awunakukhathazeka malunga nokufumana isiphelo esikusebenzelayo.
Iihenjisi zamanqatha mhlawumbi luhlobo lwehenjisi oyifotayo xa ucinga ngeehenjisi. Zisoloko zisetyenziswa kwiiprojekthi zokusebenza ngomthi ukwenza iintlobo ngeentlobo zefanitshala. Ezi zenziwe ngamacala amabini ngenqaku lokuhamba embindini, ngokwezobuchwephesha obizwa ngokuba yi knuckle yehenjisi. Iihenjisi ze-Butt zivula kwaye zivale kufana nencwadi. Xa ifakiwe, ezi zinto zinamathela kwisiqingatha somnyango kunye nesiqingatha kwisakhelo, zivumela umnyango ukuba uvule kwaye uvale.
Ikhonkco lehenjisi lempundu lisenokuba sisikhonkwane esiphakathi okanye ibhola edityanisiweyo eyenza ukuba sikwazi ukuvula nokuvala. Iihenjisi ze-Butt zibonakala ngaphandle kwekhabinethi njengoko ibhola edityanisiweyo okanye iphini ephambili iphakama kancinci.
Olu lukhetho oluthandwayo kungekuphela kokuthembeka kunye nokulula kodwa ngenxa yokuba zinokufakwa ngokulula. Elona candelo lofakelo ngamanye amaxesha elihamba ngabanini bamakhaya kukusika i-mortise, okanye ikhefu, kwikhabhinethi ye-hinge hinge yokuhlala kuyo.
Olunye uhlobo lwehenjisi yekhabinethi yihenjisi yomphanda. Ezihenjisi zibonakala njengeesilinda eziza kubakho emnyango nakwisakhelo.
Iihenjisi zekhabinethi ezifihliweyo ziihenjisi zomgqomo kuba zisebenza ngaphandle kwecandelo elibonakalayo ngaphandle komnyango wekhabhathi. Ngenxa yolu hlobo, olu luhlobo lwehenjisi ohlala uyibona-ngaphandle kwekhabinethi yokusebenzisa ekhitshini- kwiziciko zebhokisi kunye nezifuba.
Ezi ziza ngobukhulu obahlukeneyo. Zilinganiswa ngobunzulu kunye nobubanzi kwaye uya kufuna ukuqinisekisa ukuba ukhetha ubungakanani obufanelekileyo obuhambelana neekhabhathi zakho.
Iihenjisi zomgqomo zifakelwe ngokwahlukileyo kancinci kunezinye iintlobo zeehenjisi. Imingxunya emibini igriziwe: omnye kumnyango wekhabhathi kunye nomnye kwisakhelo somnyango wekhabhathi. Ihenjisi yomgqomo emva koko ifakwe kwimingxunya kwaye isebenze ngengalo edibanisa iziphelo zehenjisi.
Sele siqaphele ukuba iihenjisi ezifihliweyo ziluphawu onokuzikhetha xa kufikwa kwiihenjisi zekhabhinethi yakho kwaye iihenjisi zemigqomo zihlala zisetyenziselwa le njongo. Olunye ukhetho xa kuziwa kwiihenjisi ezifihliweyo, nangona kunjalo, iihenjisi ezingabonakaliyo. Ngokufana neehenjisi ezifihliweyo, ungabona ezi kubhekiswa kuzo njengeehenjisi ezifihliweyo kunye neehenjisi zaseYurophu okanye iihenjisi zekomityi.
Iihenjisi ezingabonakaliyo zincinci kwaye zenziwe ukuba zifihlwe kwimbonakalo engaphandle kwekhabhinethi kwaye zithathe indawo encinci kangangoko. Kungenxa yokuba zikwenzelwe ukuba zifihlwe ikakhulu kwimboniselo xa ikhabhinethi ivulwa nayo. Njengoko zifihliwe, ezi azifiki kwiziphelo ezahlukeneyo.
Ezi ntlobo zeehenjisi zekhabinethi yekhitshi zihlala zisetyenziswa kwiikhitshi zale mihla, zangoku kunye nezincinci, iinkqubo zemidlalo yeqonga nakwiminyango yentsimbi. Olu lukhetho olukhulu xa kufikwa kwiikhabhathi zakho zasekhitshini ukuba ufuna ukubanika imbonakalo yokudada.
Olunye uhlobo lwehenjisi oluhamba ngaphezu kwegama elinye, iihenjisi zokunyuka komhlaba zihlala zibizwa ngokuba ziihenjisi zomnyango ezingenasiseko. Eli gama livela kwinto yokuba ezi azisoloko zixhonywe ngaphezulu kwesakhelo somnyango wekhabhinethi. Endaweni yoko, ezihenjisi zonyuka ngaphakathi kwisakhelo somnyango nangasemva komnyango wekhabhathi.
Ngenye indlela, iihenjisi zokunyuka komhlaba ngamanye amaxesha zikwanyanzeliswa ngaphezulu komphezulu wesakhelo nomnyango. Ezi ntlobo zeehenjisi zentaba ezingaphezulu azihambelani negama leehenjisi zomnyango ezingenasiseko. Okwangoku, siza kugxila kwiihenjisi zeminyango engenafreyimu.
Ezihenjisi zikuvumela ukuba uvule iingcango zekhabinethi yakho ngaphandle kokukhathazeka ngokubetha isakhelo xa ucango luphuma. Iihenjisi zentaba ezingaphezulu zihlala zihlala zihlengahlengiswa ukuze zisebenze ngokuvulekileyo kwaye zivale iimfuno zomnyango wakho.
Kukwalula nokufaka ezihenjisi. Kungenxa yokuba ngokungafani neehenjisi ze-butt, azidingi kufa kwenzelwa ukufakwa kwazo.
Iihenjisi zomtya zijongeka ngokuchanekileyo njengoko igama libonisa. Ezi zikhangeleka ngathi ngumtya, onamaphiko emacaleni afanayo kuwo omabini amacala. Iihenjisi zomtya zibekwe ngaphandle kwekhabhinethi yekhitshi. Ngenxa yoku, ziyafumaneka kwiifom ezininzi zinokhetho oluninzi kugqityiwe, imibala, imibala, kunye neemilo.
Ezi ntlobo zeehenjisi ziyaxatyiswa ngenxa yokuguquguquka kwazo. Xa uzisebenzisela iikhabhathi zasekhitshini lakho, uya kufuna ukusebenzisa iinguqulelo ezimfutshane zezi ntlobo zeehenjisi. Ezi zihlala zisetyenziswa-kwiinguqulelo zazo ezinkulu- emasangweni kuba zinokubamba ngokulula ubunzima obuninzi. Oku kunokubenza babe lukhetho olukhulu ukuba uneminyango yekhabhinethi enzima.
Lilonke, ezi ntlobo zeehenjisi zezona zinokubhetyebhetye onokuzikhetha. Iindidi zezinto onokukhetha kuzo zikuvumela ukuba ufumane kanye le nto uyifunayo kunye nezinto ozifunayo kwiikhabhathi zakho zasekhitshini.
Siqaphele ngaphambilana ukuba ukuba uneekhabhathi ezingahambelaniyo kakuhle nesakhelo somnyango, uya kufuna ukukhetha iihenjisi ezenza loo akhawunti. Ukuba ucango lwekhabhinethi yakho luphuma kwisakhelo, iihenjisi ze-offset lolunye lolona khetho lufanelekileyo lokuqinisekisa ukuba ziqhotyoshelwe ngokufanelekileyo.
Into yokuqala oya kuyiphawula xa ujonge kwihenjisi ye-offset kukuba ayihambelani ngokugqibeleleyo, umzekelo, iihenjisi zeempundu. Endaweni yokuba elinye icala liphezulu kunelinye. Olu luyilo luvumela ezihenjisi ukuba zifikelele kumnyango wekhabhathi ocacileyo okanye onqabileyo kwaye zilunamathele kwisakhelo.
Iihenjisi zekhabhinethi ezingasasebenziyo ziyabonakala ngaphandle kwekhabhinethi njengoko zinamathela ngaphandle komnyango wekhabhathi nakwisakhelo sayo. Ngenxa yoku, banikezela ngeendlela ezininzi xa kufikwa kumba wokuhombisa kunye nokugqiba.
Ayizizo zonke iikhabhathi ezivulekileyo ekudibaneni kwesakhelo nakumnyango. Ngelixa liqhelekile, kukho iingcango ezisebenza njengeengcango ezivaliweyo, kunye neekhabhathi zikaSusan ezingamavila umzekelo. Le minyango ngamanye amaxesha ingena kwikona yekhabhinethi kodwa ngamanye amaxesha isetyenziselwa ukugubungela ubuso bekhabhinethi enye.
izimvo zesikhumbuzo seminyaka eli-10
Amakhonkco ekhabhinethi ekhoneni asebenza ukubonelela ngohambo lokuhamba ezi ntlobo zeminyango yekhabhinethi eziyifunayo. Bahlala begquma ukusuka ngaphakathi komnye umnyango ukuya ngaphakathi komnye kwaye bavumele le minyango ukuba isongeke ivuleke okanye ivalwe. Ukubonakala ngqo kwezihenjisi kuyahluka.
Ukuba uneminyango yekhabhinethi enzima, uya kufuna ukuqaphela ukugoba kwiihenjisi. Njengeehenjisi zomtya, ezi ntlobo zeehenjisi zinokuthwala ubunzima obukhulu kwaye zisebenze ngokuchanekileyo. Njengoko befuna ukunika inkxaso eyongezelelweyo, banokuma kancinci okunzima ngakumbi kunoko sijonge kude kube ngoku okuncamathisela emnyango nakwisakhelo.
Isongelo esijikeleze iihenjisi sibekwe ngasemva kumnyango wekhabhathi yakho kwaye sinobuso obongezelelweyo obusonga emnyango ukuze bubonakale ngaphambili. Okokugqibela, iphiko lesakhelo liqhagamshela kwisakhelo somnyango wekhabhathi. Olu luyilo aluthethi kuphela ukuxhasa iingcango zekhabinethi yakho enzima kodwa ukuqinisekisa ukuba zigcinwa zizinzile ngokunjalo.
Oku kwaziwa njengokusonga ngokupheleleyo kwiihenjisi. Ukusongelwa ngokungafaniyo kwiihenjisi lolunye ukhetho. Olu hlobo lokugoba olujikeleze ihinji ludibanisa kuphela kumacala amabini esakhelo kwaye emva koko ujije emaphethelweni kunamacala amathathu esakhelo.
Njengoko uyilo lubonisa, ezihenjisi zibonakala kakhulu. Ke, ziyafumaneka kwinani lokukhetha ukuze ugqibe.
Sikhankanye okuninzi malunga nokuhonjiswa kwehenjisi kwiihenjisi zekhabinethi ngalo lonke ixesha lokuchaza ukhetho lwakho kwiintlobo zeehenjisi. Ukukunceda uqhubeke uqonde ukuba zeziphi iindlela onokukhetha kuzo, masikhe sithathe umzuzwana ukujonga iintlobo zehenjisi zekhabinethi ezigqityiweyo.
Ukugqitywa okuqhelekileyo kwiihenjisi zomnyango wekhabhinethi kubandakanya oku kulandelayo;
● Brass -Ikhabhathi yentsimbi yekhabhathi ifana kakuhle iikhitshi ezineekhabhathi ezimnyama .
● Yenziwe ngentsimbi eshayinayo
Ngokufana nokukhetha Umbala wepeyinti ekhitshini , ungathenga iisampulu zokugqitywa ocinga ngako ukubona indlela ezinokujongeka ngayo nokuhonjiswa kwekhitshi ngaphambi kokuba uzibophelele ekuthengeni iihenjisi zakho ezintsha. Ukongeza kukho iintlobo ezahlukeneyo ze Isoftware yoyilo lwekhabinethi yasekhitshini iyafumaneka ukukunceda ukuba ube nomfanekiso ngqondweni woyilo lwakho ngaphambi kokuthenga naziphi na izinto.
Ngelixa ukugqitywa kuyindlela entle yokuqinisekisa ukuba iihenjisi zakho zekhabhinethi entsha ziyahambelana nokuhonjiswa kwekhitshi lakho, kukho izitayile zeehenjisi ezingabizi ukukhangela ukugqitywa okwahlukileyo kuba kungabonakali xa ucango lwekhabhathi luvaliwe.
Iihenjisi zekhabhinethi yaseYurophu ziihenjisi ezifihliweyo ezihlala zithandwa. Ziza ngeendlela ezahlukeneyo, nangona. Unokufumana iihenjisi zaseYurophu ezisondeleyo, iihenjisi zeminyango emikhulu okanye engqindilili, nangaphezulu.
Ukutshintsha iihenjisi zekhabinethi zasekhitshini kunokwahluka kancinane kuxhomekeke kuhlobo lwehenjisi yekhabhathi obuyisebenzisa kunye nohlobo lweehenjisi zekhabinethi ozibeka endaweni yazo. Into ebaluleke kakhulu ukuba uyiqwalasele ngaphambi kokuqala kukufumanisa uhlobo lweengcango zekhabinethi ekhitshini onayo. Zininzi iindlela zeengcango ezinje ngokugubungela ngokupheleleyo, ukugquma okungaphezulu, ukufakwa, iphaneli ephakanyisiweyo kunye neengcango zepaneli ezifihliweyo ukubala ezimbalwa. Uya kufuna ukuqinisekisa ukuba ihenjisi oyithengayo yisitayile sakho sekhabhinethi. Apha ngezantsi sijonga isikhokelo esisisiseko sendlela onokufaka ngayo iihenjisi zekhabhinethi endaweni yakho.
Xa kuziwa ekukhetheni nasekufakeni iihenjisi zekhabhinethi, kubaluleke kakhulu ukuba uyifumane. Ngethamsanqa, akukho nzima ukufumana imilinganiselo efanelekileyo xa sele uyazi ukuba ungayenza njani.
Ukuqala, beka umnyango wekhabhathi apho uyakuseta khona xa ixhonyiwe. Thatha isiqwenga seteyipu yompeyinti kwaye usolule usolula ukusuka emnyango ukuya kwisakhelo apho ihenjisi iya kuhamba khona. Vula ikhabhathi kwaye ulinganise umgama ukusuka kumda wetape ukuya kuvulo lwekhabhinethi - lo ngumlinganiso wokugquma oza kuyidinga ukukhetha iihenjisi ezilungileyo.
Qinisekisa ukuba ufumana ihenjisi elungileyo kwicala lekhabhathi nabo baya kuba kuyo! Iihenjisi ekunene ziya kuqatshelwa iRH kwaye ngasekhohlo, LH.
Amanyathelo afanelekileyo okufaka ihenjisi yekhabinethi aya kwahluka kancinci kuxhomekeke kuhlobo luni lwehenjisi oyisebenzisayo. Kananjalo, apha, siza kujonga kwimiyalelo ngokubanzi enokuthi ifune ukuba iguqulwe kancinane ngokuxhomekeke kwiimfuno zehenjisi oyisebenzisayo.
Ukuqala, kuya kufuneka ususe iihenjisi ezindala kwikhabhinethi. Ungakwenza oku ngokulula ngokukhulula iihenjisi kumnyango kunye nakwisakhelo. Imingxunya endala ekuhlalwa kuyo ngezikrufu kufuneka igcwaliswe ukuqinisekisa ukuba iihenjisi ezintsha azifakwanga kwimingxunya egugileyo. Abanye bacebisa ukuba oku kwenziwe ngokuncamathisela kwidolo elincinane emngxunyeni kunye nokuyifaka entlabathini ngokugungxula kunye nesakhelo sonke.
Okulandelayo, uya kufuna ukubeka iihenjisi okwexeshana apho zenzelwe ukuba zihlale emnyango kwaye zilungelelanise nomphetho. Phawula apho iihenjisi ziya kulungelelana khona uze ususe iihenjisi. Imingxunya yesikhokelo sokuqhuba ngokuyinxalenye kumnyango wekhabhathi ezincinci kunezikrufu kwaye ujije iihenjisi emnyango.
Sebenzisa i-straightedge kunye ne-clamp ukuqinisekisa ukuba iingcango zekhabinethi zikwinqanaba apho zihlala khona kwikhabhinethi kwaye ziphawula imingxunya yesikhokelo. Shenxisa iingcango ngaphandle kwendlela yokuzigrumba kwaye emva koko ungene endaweni yeengcango zokujija iihenjisi.
izipho zomtshato zeendwendwe izimvo
Nantsi ividiyo egubungela inkqubo ekufakweni kweehenjisi zekhabhinethi yasekhitshini:
Iihenjisi zekhabhinethi yaseYurophu zenziwe ngohlobo lokuba kwenziwe uhlengahlengiso xa kufuneka njalo. Xa uvula ucango lwekhabhathi yakho, uyakuqaphela ukuba iihenjisi zakho zinezikrufu ezine kufutshane ekunqamlezweni enye ingaphezulu, enye isezantsi, kwaye icala elinye icala phakathi kwazo.
Ukuba ufuna ukulungelelanisa ikhabhathi yakho ngokuthe tye, hlengisa isikrufu kwiziko elikufutshane nehenjisi. Ukuyijika ngokwewotshi kuza kuzisa ucango kunye nomda wekhabhinethi ngokudibeneyo.
Ukulungelelanisa nkqo, uza kusebenzisa izikhonkwane eziphezulu nezisezantsi. Xa ezi zikrufu zikhululwe, ucango luya kutshintsha luye ezantsi. Qinisekisa ukuba izikrufu zisanele ngokwaneleyo ukuxhasa umnyango.
Isikrufu sokugqibela sisetyenziselwa ukulungelelanisa ucango ukuya phambili nangasemva. Ukuba umnyango awunasithuba saneleyo, umnyango awuyi kuvalwa ngokuchanekileyo.
Xa ujonge apho ungathenga khona iihenjisi zekhabhinethi, unokhetho oluninzi. Ivenkile yakho yehardware yendawo inokubanokukhetha okuninzi kodwa kwiminyaka ye-intanethi, uya kuthenga kwi-Intanethi. Ukongeza, ukuthenga kwi-Intanethi kuya kukunika ukhetho olubanzi.
Olona khetho lucacileyo kukutyelela oogxa be-Intanethi kwiivenkile zehardware. Iivenkile ezikwi-Intanethi ezenziwa yiWayfair, iLowe's okanye iDepho yasekhaya ziindawo ezintle zokufumana iintlobo eziqhelekileyo zehenjisi zekhabhinethi yasekhitshini. Unokujonga kwakhona kwiindawo ezingazinikelwanga kwizixhobo ezinjengeAmazon ngokunjalo.
izimemo zomtshato kwaye ugcine iiphakheji zemihla
iilokhwe zomtshato womtshato omnyama
Igumbi lokuhlala kwigaraji
inqaku elifutshane lothando kuye
Iindawo ezilungileyo zokuya kwi-honeymoon
itafile yokutya ubungakanani bombhoxo